အမေရိကန်သမ္မတ ထရန့်နှင့် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီတို့ ဝါရှင်တန်တွင် အာဖဂန်နစ္စတန်၊ မြန်မာ၊ ?? - Yangon Media Group
အမေရိကန်သမ္မတ ထရန့်နှင့် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီတို့ ဝါရှင်တန်တွင် အာဖဂန်နစ္စတန်၊ မြန်မာ၊ ??
ဝါရှင်တန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်နှင့် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် နာရန္ဒြာမိုဒီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်က အိမ်ဖြူတော်တွင်တွေ့ဆုံကာ ဒေသတွင်းရေးရာများဖြစ် သော မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံရေး၊ အာဖဂန်နစ္စတန်တိုက်ခိုက်မှုများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးရာများအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု အိမ်ဖြူတော်က သတင်းထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်သည်။
အမေရိကန်အစိုးရအနေ ဖြင့် အိန္ဒိယအစိုးရနှင့် စီးပွားရေး၊ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးကိုလည်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်ဟု သတင်းတွင်ဖော်ပြ ပါရှိထားသည်။ ခရီးသွားများ အပန်းဖြေနှစ်သက်သော မော်လ် ဒိုက်နိုင်ငံသည် ပေကျင်းအစိုးရ၏ ရပ်ဝန်းတစ်ခုလမ်းတစ်လမ်း စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်နေပြီး အာရှ နိုင်ငံများအတွင်း အရေးပါသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်နေ၍ အိန္ဒိယနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့သည် မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံကြမည်ဖြစ်ကြောင်း လည်းပါရှိခဲ့သည်။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ နိုင်ငံများသည် တရုတ်၊ ပါကစ္စတန် နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံများနှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန်လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံလုံခြုံ ရေး၊ အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်နျူက လီးယားယှဉ်ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံဖြစ်လာ ကြသည်ကိုလည်း ထည့်သွင်းဆွေး နွေးကြကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်ရင်း နှီးသော အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် တာလီဘန်များအမြစ်ပြတ် စေရေးကိုလည်း သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထရန့်နှင့် မိုဒီတို့သည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအား အပြုသဘောချဉ်းကပ်ဆွေးနွေးရန်လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရှားမားဆွာရပ်(ဂ်ျ)နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရက်စ်တီလာဆင်တို့သည်လည်း အောက်တိုဘာလအတွင်းက နယူးဒေလီတွင် ဒေသအရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တွင် အငြိမ်းစား ဝန်ထမ်းများအတွက် တိုက်ခန်းရောင်းချပေးမည်
နဝမတန်း ပြင်ပဖြေစာမေးပွဲများ မေ ၂ ရက်တွင် ကျင်းပမည်
အီရတ်တွင် ဒေသအစိုးရ အဆောက်အအုံအား ဆန္ဒပြသူများ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်
ဒါဗို့စ် ညီလာခံသို့ ဒေါ်နယ်ထရန့် တက်ရောက်၊ အမေရိကန် ပထမမူဝါဒများ ကြွေးကြော်
ကလောမြို့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ငွေကျပ်သိန်း ၅ဝဝ ကျော်တန်ဖိုးရှိ ဥရောပပုံစံ နာရီစင် သစ်ဖွင့်
ပွင့်လင်းရာသီရောက်ရှိလာသော်လည်း မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်အရောင်းအဝယ် ယခင်နှစ်များကထက်နည်းပါးေ